Ururka Somali Stars Forum oo ONLF ku dhiiri galiyay dadaalka ay wadaan. | ogaden24
Ururka Somali Stars Forum oo ONLF ku dhiiri galiyay dadaalka ay wadaan.
Dec 28, 2016 - Aragtiyood
Xaaladda Geeska Afrika sanidihii ugu dambeeyay oo hadhaysay colaad & Abaabro marka laga yimaado Abaaraha waxaan colaadaha jira u aanaynayaa xukuumadda gumaysiga Itoobiya oo u argta in ay colaadu dantooda tahay hadii ay colaada joojiyaan dadka dulman xaqooda helayaan oo ay ugu horayso shacabka Somaliyeed ee ay gumaysto.
Burburkii dawladii dhexe ee Somaliya wuxuu Itoobiya u noqday fursad hadabi ah kaas oo keenay maanta in ay siyaasadda dalka Somaliya ayagu hagayaan Somalina wax aynan Itoobiya go’aaminin aynan go’aan u arkin taas oo ina dhaxal siiyay bulburka aan ilaa maanta ka soo kaban lanahay waxayna salka ku haysaa cadowgeeni oo aan u gacan gashay soo in uu siduu rabo kaayeelo maha jawaabta oo kooban waa haa.
Colaada inaga iyo xabashi waa fac ka soogaadh waxayna Itoobiya xoog ku haysataa dad & dal Somaliyeed oo ciqaab aduun ku hayso doonaysana khayraadka dalkaas in ay manaafacsato oo dhaxalka dhulkeena ay siiso Itoobiyaan kale qorshahaas oo ah mid fog oo dhamaan xukumadaha soo maray midwalba midka kale ka dhaxlayay, hamigaas beeta ah wuu u koray waxayna maanta aragtay xeebaha dalka Somaliya iyo guud ahaanba dalka Somaliya in uusan dad lehba jirin loona kala dhuumanayo marka soo waxaaga wax allaah kuugu dar maha.
Ururka Somali Stars Forum baadhitaan uu sameeyay waxaa u soo baxday damaacigaas aan kor ku soo xusnay ee ku jira Itoobiya waxaa hortaagan oo beeniyay waa Jabhadda xaq udirka Somaliyeed ee ONLF oo Itoobiya godkasta oo ay galaanba ka fudhisay qorsheyaal badana ku beeniyay waxayna ONLF guulaysatay markii ay gacanta ku dhigtay shacabkooda iskuna xidhay gudo iyo dibadba maantana tahay xooga 1aad ee Somalia u dhaq-dhaqaaqa.
Hadaba waxaan maalmahan arkaynay shirar ay kawadaan wadamada dibada oo ay ugu magacdareen Wadatashiga Xubnaha Jaaliyaadka waxaan u aragnaa in ay tahay guul weyn in ay wadatashi la sameyaan Jaaliyadka oo muhiim u ah halganka lagu xoreynayo dalkaas hadaanu nahay Ururka Somali Stars Forum si weyn ayaan u soo dhawaynayaa dadaalkodaas oo ah mid guul u ah dhamaan shacabka Somaliyeed.
Qofkasta oo Somali ah dantiisu waxay ku jirtaa danta guud ee umadiisa waxaana aaminsanay qorshe walba oo lagaga hortagi karo Itoobiya in ay tahay mid waajib ku ah xubin kasta oo Somaliyeed meshuu raba hajogeen. Midnimadu waa furaha guusha midnimana waxaa lagu gaadhi karaa in aad ogaatid cadowgaagu waa kuma? yaa kuu diidan midnimadaada oo kaa hortaagan? mase iswaydiisay qofka Somaliga ah qofka kale ee Somaliga in uusan cadow u noqon karin.
Ugu dambayntii Ururka Somali Stars Forum wuxuu u taagan yahay midaynta umadda Somaliyeed wuxuu ka soo horjedaa tafaraaruq & danayste dantiisu tahay ku xidhnaanshah cadowga waxaana leenahay guulaysta Jabhadda ONLF hana daalina xaqiina waad helaysaan insha allaah.
Ururka Somali Stars Forum oo ah Urur ay ku midobeen dhalinyaro Somaliyeed, ujeedada ugu weyn ee loo aasaasay waxay tahay sida ka muuqata calaamadiisa in uu mideeyo umadda Somaliyeed ee lakala qaybiyay.